निर्वाणमा पुग्ने बाटो | BodhiTv
निर्वाणमा पुग्ने बाटो
बुद्ध भन्नुुहुन्छ, “निर्वाणलाई देखेर, सुंघेर, आवाज सुनेर, स्वाद लिएर, छोएर र मनले महसूस गरेर, चिन्‍न, जान्‍न सकिंदैन। किनकि माथिका सबै लौकिक विषयवस्तुलाई थाहा पाउने, महसूस गर्ने माध्यम हुन्। तर निर्वाण लौकिक होइन, त्यो त लोकुत्तर( लोक भन्दा परको) हो तर हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो छ। निर्वाण एक सत्य हो।
तर हामी भने लौकिक भन्दा परको कुरा मान्छौं मात्रै जान्दैनौं। त्यसैले निर्वाणसम्म पुग्ने प्रविधिमा विश्वास, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको वचन भनेर अस्तित्वहीन फिक्का रूपमा गर्दछौं। ९९% मानिस त निर्वाण भन्ने कुरा त उहा पोह ! हो, मानिसलाई अल्झाउने कुरा मात्र हो भन्छन्। ‘निर्वाण ‘ शब्द देखि पर छ। त्यसैले बोलेर वा लेखेर बताउन सकिन्न।यस बारे बढी माथि नै जताई सकिएको छ। निर्वाणको अवस्थासम्म पुग्ने प्रविधि बारे हामी कुहिरोको काग नै हौं।
आज अकस्मात यो कुरा आउनुमा म न्यूयोर्कबाट भर्जिनिया जान लाग्दा गाडी भित्रको GPS system नै कारक तत्व हो। भर्जिनिया न्यूयोर्कबाट ३७९ माइल टाढा छ। ड्राईभ गर्ने छोरा पनि पहिले भर्जिनिया गएको थिएन। न्यूयोर्क-भर्जिनियाको विचमा विभिन्न ठाउँमा जाने सडकहरू माकुराको जालो जस्तै फैलिएको थियो। कहाँबाट turn लिएर कुन सडकबाट जाने हो थाहा छैन। GPS system मेरो लागी नौलो भएकोले यसले भर्जिनिया पुर्याेउँछ कि पुर्‍याउँदैन विश्वासै थिएन। छोराको लागि पनि मेशीनले देखाएको नीलो सडकलाई Arrow ले देखाए अनुसार पछ्याउनु बाहेक अरू केहि आधार थिएन। भर्जिनियाको दूरी देखाईराखेको छ, दूरी कम हुँदै जाँदै छ, पुग्ने समय बताई राखेको छ, पुग्ने समय नजिक आइरहेको छ। यदि GPS system लाई विश्वास नगर्ने हो भने ती सबैलाई मान्ने आधार छैन। यो मेरो धारणा हो, ड्राईभिङ्ग गरिरहेको छोराको होइन। आखिर विचमा चिया खान र दिसा पिसाबको लागि रोकिएको समयको कारण आधा घण्टा ढीलो भर्जिनियाको भाञ्जाको घर अगाडि नै पुर्‍याई दियो। मान्छेले भनेको र नक्सामा देखाईएको मात्र होइन, साँच्चिकै भर्जिनिया स्टेट पनि रहेछ र पुग्न पनि पुगियो।
तब मलाई विचार आयो, यदि म यसरी मेरो गन्तब्य स्थल भर्जिनिया GPS ले डोर्‍याएको आधारमा भर्जिनिया पुगें भने बुद्धले वताउनु भएको प्रविधिबाट निर्वाणमा किन नपुग्ने? GPS ले satellite बाट देखाइराखेको हुन्छ भने बुद्धले आफू स्वयंले राम्रोसंग निर्वाणको मार्ग थाहा पाएको र पुगेको पनि हुनाले उहाँको निर्देशनमा मिहेनत गरेर निर्वाणमा पुग्न किन नसक्नु? मेरो लागि भर्जिनिया छ कि छैन भन्ने थियो, अब त्यो पनि रहेछ र GPS ले देखाएको बाटोबाट पुग्न पनि पुगियो। त्यसैले निर्वाण छ र बुद्धले देखाएको मार्गबाट निर्वाणमा पुग्न सकिन्छ भन्नेे पक्का आस्था जाग्यो। मैले भर्जिनिया पुग्न ५ घण्टा धैर्यपूर्वक प्रतिक्षा गरें। निर्वाणमा पुग्न अविचल आस्था र मेहेनतबाट कति समयसम्म वा जन्मसम्म लगातार प्रयास जारी राख्नु पर्ला त्यो गर्नु पर्छ। प्रयत्न निष्फल हुँदैन।